Senda Viva, valan-javaboary fialan-tsasatry ny fianakaviana lehibe indrindra any Espana | Vaovao momba ny dia
Maria | | Ocio, Nandehandeha niaraka tamin'ny ankizy
Sary | Làlana velona
Eo akaikin'ny Bárdenas Reales dia i Senda Viva, zaridaina natokana ho an'ny fialam-boly ankohonana nekena ho lehibe indrindra ao amin'ny Saikinosy Iberia. Fangaro miavaka amin'ny valan-javaboary fialamboly, zoo ary hetsika izay samy tiana na tanora na antitra. Tsy afaka mamoy an'ity ianao!
1 Aiza no misy azy?
2 Famindrana manaraka an'i Senda Viva
3 Manao ahoana ny valan-javaboary Senda Viva?
4 Manintona an'i Senda Viva
5 Fianakavian'i Senda Viva
6 Vidiny tapakila
7 Fampahalalana mahaliana amin'ny Senda Viva
8 Ora ao amin'ny Senda Viva
Aiza no misy azy?
Senda Viva dia eo amoron'ny morontsirak'i Navarrese, akaikin'ny Park natural voajanahary Bardenas Reales (nambaran'ny UNESCO momba ny Biospera) ary 80 kilometatra atsimon'i Pamplona. Miaraka amin'ny 120 hektara ny fanitarana azy, miatrika ny valan-javaboary fialamboly lehibe indrindra ho an'ny fianakaviana ao Espana izahay
Raha te hiditra amin'ny Senda Viva ianao dia mila manao izany amin'ny alàlan'ny làlana, indrindra amin'ny alàlan'ny lalana Virgen del Yugo s / n, lalana 31513 Arguedas, na amin'ny fiara tsy miankina na amin'ny fanakaramana ny serivisy fitaterana ny habaka indrindra mandritra ny vanim-potoana avo, izay manangona ny mpitsidika eo am-baravaran'ny trano itoerany ary mamela azy ireo amin'ny vavahady iray ihany. Io dia ahafahanao mitahiry diabe kely tsy maintsy ataonao amin'ny alàlan'ny fiara manokana.
Aza avela hisy taitaitra! Ity lalana kely ity dia vita miorim-paka ary ahafahanao mandeha an-tongotra mahafinaritra mandinika ny manodidina. Na izany aza, ny fakana ankizy kely dia mety ho somary lava, indrindra eny an-dàlana hiverina rehefa efa reraky ny andro lava mankafy ny Senda Viva.
Famindrana manaraka an'i Senda Viva
Rehefa tafiditra ao amin'ny valan-javaboary Senda Viva ny mpitsidika dia afaka mivezivezy an-tongotra na mampiasa karazana fitaterana isan-karazany toy ny tranofiara na fiaran-dalamby kely. Amin'ny ankapobeny, ny fahita matetika amin'ireo fitaterana ireo dia manodidina ny 25 minitra na dia miankina amin'ny fidiran'ny olona aza.
Manao ahoana ny valan-javaboary Senda Viva?
Ny zotra fitetezana manaraka an'i Senda Viva dia mizara efatra: ny Fambolena, ny ala, ny tanàna ary ny foara. Raha vantany vao miditra amin'ny vala isika dia mahita ny Tanàna izay fiatombohan'ny làlana. Eto no misy ny faritra misy ny fampahalalam-baovao, ny valizy sy ny arimoara, ny toerana hanofana seza zazakely sy ny sezakodia, ny fivarotana fahatsiarovana, ny trano fandraisam-bahiny, ny fitoeran'omby ary ny tranobe manjenjena, trano mampatahotra iray onenan'ireo olona hafahafa.
Mandeha amin'ny làlan'ny omby mankany amin'ny Fair, isika dia afaka mahita karazana toy ny soavaly Burguete, ondry latxa, omby Pyrenean na omby. Raha vantany vao hita ao amin'ity faritry ny valan-javaboary ity isika dia tsy afaka tsy hahita ireo manintona toy ny maze rano, ny siramamy misy rivotra, ny falifaly, ny mpitifitra na ny fitaratra mihomehy. Hialana sasatra, tsy misy tsara noho ny mankany amin'ny terrasin'ny farihy na ny brasserie an'ny foara. Aorian'izay dia afaka manohy ny fitsidihana mandinika ireo gidro capuchin na jaguar ianao. Mampiaiky!
Manohy mankamin'ny Ala izay misy ny zebra, ostriches, amboadia na tigra no tena mahery fo. Ho hitanao eto koa ny fisarihana fahalavoana maimaimpoana sy ny kianja filalaovan'ny ankizy. Izy io koa dia manana toeram-pisakafoanana iray hafa antsoina hoe El Balcón de la Bardena ary fomba fijery iray izay hahagaga ny fahitana mahatalanjona ao amin'ny Bardenas Reales Natural Park.
Ary farany, ao amin'ny Farm misy aviary 1.100 2 mXNUMX, ny toeram-pambolena mini ary ny fampisehoana sidina raptor. Ho fanampin'izay, eto misy serivisy tena antsoina hoe La Recoleta hanana sakafo maivana haingana.
Manintona an'i Senda Viva
Ny Senda Viva Park dia mahaliana mihoatra ny telopolo ho an'ny mpijery rehetra, anisan'izany ny: Bobsleigh (lalana iray eo amin'ny iray kilaometatra lava); Valhalla (fitsangatsanganana zava-misy virtoaly eny amoron-dranomasina); Tubing mahitsy (izay idiran'ny mpitsidika amin'ny tehezan-tany 300 metatra sy 60 metatra tsy fitoviana misy float lehibe) na ny Great Zip-line, miditra amin'ny hafa.
Sary | Hotel Senda Viva
Fianakavian'i Senda Viva
Ity valan-javaboary ity dia efa manana biby 800 mahery amin'ny karazany 200 toy ny bera volontany, otter, liona, kangaroo wallaby ary tigra fotsy roa. Senda Viva dia manohy mandray anjara amin'ny programa amin'ny fitehirizana ireo teratany atahorana ho lany tamingana toa ny nangka Navarrese, omby betizus na soavaly burguete.
Ny tapakilan'olon-dehibe any Senda Viva dia manana vidiny 28 euro ao amin'ny biraon'ny boaty sy 25 euro an-tserasera Raha ny tapakila ho an'ny ankizy, hatramin'ny 11 taona, ary ho an'ireo efa misotro ronono dia 21 euro amin'ny boaty ary 18 euro an-tserasera. Malalaka ny zaza latsaky ny 5 taona. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra, ny andro faharoa amin'ny fitsidihana ny valan-javaboary Senda Viva dia antsasa-manila ny fidirana.
Fampahalalana mahaliana amin'ny Senda Viva
Ny zaridaina dia natao ho an'ny ankizy kely fa ny manintona rehetra dia manana ny halavany farafahakeliny takiana. Izy ireo dia azo apetraka amin'ny zavatra maro, eny, miaraka amin'ny vitsivitsy.
Tsy azo atao ny misotro na sakafo satria misy trano fisakafoanana maromaro ao Senda Viva ahafahanao mijanona hisakafo na hiala sasatra. Na izany aza, misy loharano fisotro rano na aiza na aiza.
Raha mitsidika an'i Senda Viva ianao mandritra ny lohataona na fahavaratra, dia tsara ny mitondra satroka, sunscreen ... satria mafana be izy io.
Misy Wi-Fi manerana ny valan-javaboary.
Ora ao amin'ny Senda Viva
Hatramin'ny 4 Novambra: Sabotsy sy Alahady manomboka amin'ny 11:00 maraina ka hatramin'ny 20:00 alina.
Tetezana El Pilar: manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 Oktobra, manomboka amin'ny 11:00 maraina ka hatramin'ny 20:00 alina.
Tetezana Novambra: manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 4 Novambra, manomboka amin'ny 11:00 maraina ka hatramin'ny 20:00 alina.
Nanomboka ny 5 Novambra: nakatona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ocio » Senda Viva, valan-javaboary fialamboly lehibe indrindra ho an'ny fianakaviana ao Espana
Fitsangatsanganana any amin'ny Victoria Falls tsara tarehy